Jadwalka Doorashadda Aqalka Sare oo lagu dhawaaqay - GHDHF | KEYDMEDIA ONLINE
Jadwalka Doorashadda Aqalka Sare oo lagu dhawaaqay - GHDHF
Guddiga doorashada ee heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa waxay soo saareen jadwalka doorashooyinka ee Aqalka sare iyo Golaha shacabka Baarlamaanka federaalka.
MUQDISHO, KON - Guddiga ayaa ku dhawaaqay in tartanka doorashada Aqalka Sare diwaan-gelintiisa ay bilaabaneyso saddex maalmood kadib, 26-da bisha December.
Warqaddaan oo hortaala Keydmedia Online ayaa lagu sheegaya in diwaan-gelinta lasoo gabagabeynayo 29ka bishaan December, halka doorashada kuraasta Aqalka Sare lagu dhameystirayo inta u dhaxeysa 31da December illaa 6da Jannaayo 2021.
Guddigaan oo uu wali muran ka taagan yahay ayaa waxaa ka maqan guddigii ka matali lahaa Jubbaland iyo Putland.
Guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay dowlad goboleedyada dalka sida Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur galbeed iyo xubnaha guddiga ee ay soo xushay dowladda dhexe, waxaana ka maqan guddigii ku matali lahaa Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo u maqan sabab la xiriirta khilaaf kala dhaxeeya dowladda dhexe.
Tani ayaa aad usii hurin karta xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa Farmaajo iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ah, waxaana loo arkaa in Farmaajo doonayo inuu doorashada Boobo.
Guddiga soo saaraya jadwalka oo qudhiisa aan heshiis lagu ahayn ayaa la doonayaa in lagu boobo doorashada, waxaana ay taasi keeni kartaa qalalaase siyaasadeed oo dalka ka dhaca.
Qoraalka guddiga hoos ka akhriso:
Cismaan Ibraahim ayaa bishan gudaheeda Baydhabo ku dilay qof shacab ah, oo lagu magacaabi jiray Axmed Madnuur Mursal.
Shir muhiim ah oo Muqdisho lagu qabtay
Warar 23 January 2021 14:45